News Archives - Monywa News
ကှနျပြူတာကို အာရုံစိုကျကွညျ့နစေဥျ သခငျကပိတျလိုကျလို့ သခငျ့ကို စူးစူးဝါးဝါးမကျြလုံးဖွငျ့ ကွညျ့နခေဲ့တဲ့ ခဈြစရာကွောငျလေး
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များက ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုများကြောင့် ၎င်းတို့ရဲ့ အိမ်မွေတိရစ္ဆာန်များကို သူငယ်ချင်းများအဖြစ် ဆက်ဆံကြပြီး နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ သူတို့အပေါ်ကို ချစ်ကြပါတယ် ။ မင်းသူတို့ကို စိတ်ဆိုးနေရင်တောင် သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အပြုအမူတွေတိုင်းဟာ မင်းကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့
မူလတနျးကြောငျးအထိပဲ စာသငျခဲ့ရပမေယျ့ နိုငျငံခွားဘာသာစကား ၁၁ မြိုးကို ကြှမျးကငျြစှာပွောတတျတဲ့ အသကျ ၇၇ နှဈအရှယျ အဖှား
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ မကြာသေးမီက အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက ဘာသာစကား ၁၁ မျိုးပြောတက်တဲ့ အသက် ၇၇ နှစ် အဘွားကြီးကို တင်ပြလာခဲ့ပြီး အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ် ။ ကလစ်ကိုကြည့်ပြီးနောက် လူငယ်များစွာကပင် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးရန် အဖွားဆီကို သင်ယူရမဲ့ပုံပေါ်နေပါပြီ ။
ရှညျလြားလှပပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိသော မကျြတောငျမှေးကွောငျ့ မိနျးကလေးမြား၏ အားကခြွငျးကို ခံနရေသော အမြိုးသား
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ရှည်လျားလှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသော မျက်တောင်မွှေးကြောင့် မိန်းကလေးများ၏ အားကျခြင်းကို ခံနေရသော အမျိုးသား လူသားတို့သည် မျက်ခုံးမွှေးများ မဲနက်နေပြီး မျက်တောင်မွှေးများ ရှည်ပြီးကော့နေလျှင် အလိုလိုကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေ၍ ထိုလူများနှင့် ဆုံတွေ့မိသည့်အခါ နှစ်ခါပြန်ငေးမောကြတတ်သည်။အချို့သော သူများကျ မျက်တောင်မွှေး အတုတပ်ခြင်းဖြင့်
မိသားစုဝငျမြားမှ ကွညျ့ရှုမညျ့သူမရှိသညျ့အတှကျ ဆနျပွုတျရောငျးရငျး ဝမျးရဖွေရှေငျးနရေတဲ့ အသကျ ၇၈ နှဈအရှယျ အဘိုးအို
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ မိသားစုဝင်များမှ ကြည့်ရှုမည့်သူမရှိသည့်အတွက် ဆန်ပြုတ်ရောင်းရင်း ဝမ်းရေဖြေရှင်းနေရတဲ့ အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ် အဘိုးအို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာ တစ်ဦးတည်းသာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုဟာ ဆန်ပြုတ်တွေရောင်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖို့ ကြိုးစားနေရပါတယ် ။
ငယျငယျတုနျးက မုနျ့တှဝေယျကြှေးပွီး ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့သော ဘေးအိမျက ကလေးမလေးကို အရှယျရောကျလာသညျနှငျ့ တဈဘဝလုံးစာတာဝနျယူပွီး လကျထပျခဲ့သော အမြိုးသား
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ငယ်ငယ်တုန်းက မုန့်တွေဝယ်ကျွေးပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သော ဘေးအိမ်က ကလေးမလေးကို အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့် တစ်ဘဝလုံးစာတာဝန်ယူပြီး လက်ထပ်ခဲ့သော အမျိုးသား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက်၃၄နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သူ့ထက်အသက် ၁၁နှစ်ပိုငယ်သော အိမ်နီးနားချင်းကောင်မလေးကို ချစ်ကြိုက်မိသွားရင်းနဲ့ အနာဂတ်ချစ်ဇနီးလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ လက်ထပ်ခဲ့သည်။
ဆေးခွောကျနဲ့ လုပျထားတဲ့ ရခေဲမုနျ့တှကေို တရားဝငျရောငျးခနြပွေီဖွဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆေးခြောက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ရေခဲမုန့်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီး စားသုံးသူတွေဆီကနေ ကောင်းမွန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီရေခဲမုန့်အရောင်းပြခန်းကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ တရားရေးဝန်ကြီး Somsak Thepsutin ကိုယ်တိုင်က ဆေးခြောက်ရေခဲမုန့်ဟာ သာမန်ရေခဲမုန့်ထက် အရသာပိုကောင်းပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးနဲ့
ဈေးကွီးလှနျးတဲ့ ခရီးဆောငျအိတျခကိုမပေးဆောငျခငျြလို့ အလုံး ၁၆၀ ပါတဲ့ လိမ်မျောသီးတဈဖာကို မိနဈ ၃၀ အတှငျး အကုနျစားပဈခဲ့ကွတဲ့ ခရီးသှားလေးဦး
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ဟုတ်တယ်၊ လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားလာသူတွေအတွက် ခရီးဆောင်အိတ်ခတွေက တကယ့်ကို နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့မှ ခရီးသွားလာသူလေးဦးဟာ ၎င်းတို့ရဲ့လိမ္မော်သီးတစ်ဖာအတွက် ကျသင့်တဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ခ ဒေါ်လာ ၄၆.၃၅ ( ၈၅,၀၀၀ ကျပ်နီးပါး )ကို ပေးဆောင်ရန်
ကိုယျဝနျကို မမှေးဖှားခဲ့ဘဲ ၄၉ နှဈကွာ လှယျထားလို့ ကြောကျဖွဈသှားတဲ့ကလေး
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ခါတလေ သာမန်လို့ မှတ်ယူလို့မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိပါတယ်။ Zahra Aboutalib အမည်ရအဖွားအိုဟာ သူမအသက် ၂၆ နှစ် အရွယ်တုန်းက ပထမဆုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်မွေးဖွားဖို့ ခေါင်းမာစွာ ငြင်းပယ်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ Viral က
ဈေးပေါပေါနဲ့ရလို့ ကွကျတဈကောငျလုံးဝယျခဲ့ပွီး အိမျရောကျမှ ခှဲကွညျ့လိုကျသောအခါ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ လူသားတို့သည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ကုန် ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့်အခါ ဈေးချိုချိုသာသာရသော ဆိုင်တွင်သာ ဝယ်ယူလိုကြသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးသည် ဈေးထဲတွင် ဟင်းချက်စရာများဝယ်ယူရင်း အသားဆိုင်ရောက်သည့်ခါ ကြက်တစ်ကောင်လုံးကိုမှ ယခင်ဈေးထက် သက်သာနေ၍ တန်သည်ဆိုပြီး တစ်ကောင်လုံး ဝယ်ချလာခဲ့သည်။
အိမျခွရောမဲ့ခှေးအဖွဈ ၃နှဈခနျ့နခေဲ့ရပွီး သခငျ့နဲ့ပွနျဆုံဆညျးနိုငျခဲ့တဲ့ ခှေးလးရဲ့ ရငျနငျ့ဖှယျအဖွဈ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ အချို့သောအရာတွေရဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းက တစ်ကယ့်ကိုလှပလွန်းလှပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Giorgi Bereziani အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 2015 ခုနှစ်က သူ့ရဲ့ခွေးလေး Jorgen ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ် ။3နှစ်ခန့်ခွေးလေးကို မရပ်မနားတမ်းရှာဖွေပြီး
မိခငျစိတျအပွညျ့ရှိတဲ့ ခှေးမလေး မိဖွူရဲ့ မတ်ေတာတရား ( ဖွဈရပျမှနျ )
မငျးကှနျးဆရာတျောကွီး ဟောကွားခဲ့တဲ့ အသကျကွီးသူတိုငျး ဆောငျထားသငျ့သော “ဝ သုံးလုံး” အကွောငျး
အိမျထောငျသကျ(၂၅)နှဈအတှငျးမှာ တဈခါမှရနျမဖွဈလို့ မေးကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ
Copyright © 2022 Monywa News. All rights reserved. Theme: ColorNews by ThemeGrill. Powered by WordPress.